Xidigaha Ugu Muhiimsan Barcelona Oo Ka Baryaya Neymar Jr Inuu Sii Joogo Garoonka Camp Nou | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Xidigaha Ugu Muhiimsan Barcelona Oo Ka Baryaya Neymar Jr Inuu Sii Joogo Garoonka Camp Nou
Qaar ka mid ah ciyaartoyda waaweyn ee Barcelona ayaa sameynaya isku dayo ay kaga dalbanayaan Neymar Junior inuu sii joogo garoonka Camp Nou iyadoo ay isi soo tarayaan wararka xidigaan la xiriirinaya Paris Saint Germain.
Madaxweynaha Balaugrana Josep Bartomeu ayaa ku fashilmay inuu xidigaan ku qanciyo nolosha gobolka Catalonia sida ay qortay The Sun oo xiganeysa warsidaha ugu caansan gobolka ee Mundo Deportivo.
Balse – wargeyska wuxuu leeyahay – qaar ka mid ah xidigaha ugu waaweyn kooxda ayaa haatan isku dayaya iney xidigaan qanciyaan iyadoo sadex xidig la magacaabay waana saaxiibada ugu dhaw ee uu ku leeyahay kooxda.
Madaxweynaha mustaqbalka Barcelona – Gerard Pique ayaa ka mid ah shaqsiyaadka kula talinaya xidigaan inuu iska diido PSG kuna sii sugnaado Camp Nou, sidoo kale wargeyska wuxuu carabka ku dhuftay saaxiibadiisa reer Koonfurta America Lionel Messi iyo Luis Suarez.
Si kastaba hadii Barcelona ay ku fashilanto iney Neymar ku qanciso joogitaanka gobolka, waxey heli doontaa aduun dhan 196 Malyan oo Pound oo u dhiganta 222 Malyan oo Euro oo ah lacagaha lagu jabin karo heshiiskiisa.
Dhanka kale waxaa lasoo warinayaa in Paris Saint Germain ay diyaarisay qorshe ay dooneyso iney kaga badbaado xeerka dhaqaale wanaagga UEFA ee Financial Fair Play – iyadoo damacsan iney Qatar u wakiilato arintaan waxeyna culeys la kulmi doontaa marka ay ansixin weyso UEFA.